यी देवी देवताको मूर्ति घरमा राख्दा अशुभ हुने – " कञ्चनजंगा News "
यी देवी देवताको मूर्ति घरमा राख्दा अशुभ हुने
No Comments on यी देवी देवताको मूर्ति घरमा राख्दा अशुभ हुने
पुस ११ । घरमा सुख, शान्ति छाओस् भनेर हामी घरमा भगवानको पुजा ,अराधना गर्छौं । शान्ति, शक्ति र मुक्तिका लागि हामी विभिन्न शक्ति पीठहरुमा धाउने र भगवानको दर्शन गर्ने गर्छौँ र आशिर्वाद पनि लिन्छौँ । भगवानको कृपाले हाम्रो मनोकांक्षा पुर्ण हुने विश्वास राख्छौं । त्यसैले हामीले घरमा पनि विहान बेलुकी पुजा आरधाना गर्छौं । हरेक पुजाको सुरुवात गणेश भगवानबाट वा कुल देवताबाट गरिन्छ । हामीले घरमा पुजा, आरती गर्दा त्रुटी भयो भने फल प्रप्त हुँदैन ।
कुनै-कुनै देवी देवताको फोटो र मूर्तिहरु पनि घरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ । कुन-कुन देवी देवताको मूर्ति घरमा राख्दा अशुभ हुन्छ, भन्नेबारे केही जानकारी तयार पारिएकाे छ ।
यी देवी देवताको मूर्ति घरमा राख्दा अशुभ हुन्छ :
१. नटराज भगवान शिवाजीको नृत्यकला प्रस्तुत गरिएको रुप हो । शिवजीले ताण्डप प्रस्तुत गरिरहेको मूर्ति वा तस्वीर भुलेर पनि पुजा कोठामा वा घरमा राख्नु हुँदैन । यसले घरमा विभिन्न किसिमका संकटहरु निम्त्याउँछ ।
२. काली: हिन्दु देवी पार्वतीको भयड. कर रुप हो काली क्रोध अवस्थाको महाकालीको मूर्तिले घरमा नकारात्मक शक्ति प्रवाह गर्छ । परिणाम स्वरुपमा घरमा कलह, दुःख, कष्ट र पारिवारीक संकट आउँछ । त्यसैले महाकाली शक्ति वा फोटो घरमा राख्नु हुँदैन ।
३. मुङ माला लगाएको महाकालीको फोटो घरमा राख्नुभयो भने तपाईको बच्चाको दिमागमा नकारात्मक उर्जा प्रवेश गर्छ । उनिहरुमा नकारात्मक सोच भरिन सक्छ । त्यसैले कहिल्यै पनि खप्परको माला लगाएको मुर्ति पनि घरमा नरनख्नुहोस् ।
११. पुजा कोठामा हनुमानको फोटो पनि राख्नु हुँदैन । घरमा अशान्ति र भाँडभैलो मच्चिन सक्छ । एजेन्सी
← ॐ श्री माता पाथिभराकि जय! माताको कृपाले सबैको दिन सुखमय बनोस् ०७६ पुष ११ गते शुक्रबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो! → ओलीसँग सल्लाह गर्न एयरपोर्टबाट सिधै बालुवाटार पुगे प्रचण्ड, को बन्ला सभामुख ?